Fikojakojana kiraro - Ahoana no fomba hiomanana amin'ny alàlan'ny fikarakarana kiraro, hevitra ho an'ny lalantsara
Fikojakojana kiraro - fitsipika tsotra sy toro-hevitra mba hanampy anao hitazona ny kiraro tianao indrindra
Tsy mora ny mikarakara tsara ny kiraro, indrindra fa amin'ny trano kely. Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fampiasana ny habaka sy ny planeta dia nanolotra hevitra marobe mahaliana momba ny fizarana kiraro. Ankoatra izany, zava-dehibe ny mahafantatra ny fitsipiky ny fanomanana sy ny fitehirizana ireo zavatra ireo.
Aiza ny fametrahana kiraro ao amin'ny trano?
Ao an-tranony, afaka mahita toerana maro samihafa ianao raha mitahiry kiraro, ny tena zava-dehibe dia ny mifanaraka amin'ny fepetra takiana.
Light. Ny fitaovana maro dia voakasika amin'ny alàlan'ny masoandro mivantana, manova ny loko sy ny kalitaony.
Hamandoana. Ny haavon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny tahiry dia 45-55%. Ny disadisa eo amin'ny toeran'ny kiraro dia hisy fiantraikany eo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahalavoana.
Mari-pana. Mifidiana toerana hametrahana kiraro amin'ny fomba toy izany mba hisintonana ny fiovaovan'ny toetr'andro, ary ambany sy ambany.
Vovoka. Aza mitahiry ireo zavatra izay ahafahana manangona vovoka betsaka.
Avy amin'ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo dia azontsika tsoahana fa ny toerana tsara indrindra amin'ny fitahirizana dia trano fandroana, trano fandroana, trano fisakafoana ary vava. Raha tsy afaka manavaka toerana iray ianao, dia apetraho ao anaty boaty ny pairs, raha tsy izany dia lasa izy ireo ary mety ho lasa tsy misy dikany. Maro ny olona manontany tena raha azo atao ny mitahiry kiraro eny an-davarangana amin'ny ririnina, noho izany ny valiny dia miankina amin'ny toe-javatra misy azy. Zava-dehibe ny hahafeno ireo fepetra eto amin'ity toerana ity, izany hoe ny balkonina dia tokony ho vera, manana fiarovana sy fiarovana ny masoandro.
Fikojakojana kiraro - hevitra
Misy safidy marobe amin'ny fikarakarana kiraro, izay azo ampiasaina rehefa mandamina ny tranonao. Raha mitady fomba hitahirizana kiraro ianao, dia tandremo ireo hevitra malaza toy izany:
Toeram-pivarotana mifangaro. Ao amin'ny fivarotana fitaovam-pamokarana, afaka mahita karazana maro samihafa ianao izay ahitana ny kiraro miaraka amin'ny zavatra hafa, toy ny takelaka na takelajoro. Ny safidy tsara dia modely tokana ahitana tabilao ho an'ny kiraro, hooks amin'ny akanjo ivelany, banky, fitaratra ary ny sisa.
Mpitantana vertika. Misy modely samihafa amin'ny vokatra toy izany izay azo ampifandraisina amin'ny rindrina, toy ny hooks, napetraka ao amin'ny gorodona na azo alaina.
Modely fanorona. Ny fitaovana fametrahana kiraro dia mety ho lasa fanokanana ny efitrano, saingy tsy maintsy mandoa vola be ho azy ireo izy. Ny ohatra iray dia ny hazo kirokely (mpanoratra Mark Hark).
Fampiharana ny loko. Raha toa ka rehefa vita ny fanamboarana dia misy loko marevaka, dia azo ampiasaina ho toy ny fihenam-bidy amin'ny fametrahana kiraro amin'ny kiraro. Azony atao ny mipetraka eo amin'ny rindrina na any amin'ny toerana hafa mety.
Boky hazo. Ny fitoeram-bavahadim-pamokarana natsangana dia azo avy amin'ny hosotra ary tsara kokoa raha voatokana ho an'ny fitehirizana divay. Azo heverina amin'ny lanja samihafa izy ireo, nosoratana tamin'ny loko nofinidy. Mba hampitomboana ny isan'ny toerana fitehirizana, azonao atao ny manamboatra baoritra diagonal roa ao anaty boaty tsirairay, ka mitarika sela efatra.
Pallets. Ny fonosana dia nampiasaina tamim-pahavitrihana tamin'ny famolavolana trano ary avy amin'izy ireo dia azo atao ny modely tsara ho an'ny kiraro. Zava-dehibe ny fandoroana ny palette tsara, esoriny ary apetaho eo amin'ny rindrina.
Fantsona. Ny sisa amin'ny plastika na totozy hafa dia tsy voatery hariana, satria azo ampiasaina izy ireo mba hanamboatra kapa tena izy amin'ny fametrahana kiraro tsy misy fery.
Hangers. Raha misy baka maimaim-poana ao anaty fitoeran'entana, dia azonao atao ny manangona kiraro, kiraro ary manipika amin'ny valiha, mametaka azy amin'ny kibay.
Boky fitahirizana kiraro
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fitehirizana dia ny fampiasana boaty izay afaka manana rindrina mangarahara mba hahafahanao mamantatra ny mpivady. Azonao atao ny mividy ny boaty na manova azy ireo efa, ohatra, amin'ny fanoratana azy ireo amin'ny taratasy mahafinaritra. Ny boaty tsirairay ho an'ny fantsona kiraro dia azo soniavina na hikirakira azy io ho an'ny sarin'ny mpivady iray voatahiry ao anatiny. Ao amin'ny magazay dia afaka mividy harona sy fitoeran-tsoavaly samihafa, izay azo apetraka eo amin'ny toeram-pivarotana misokatra, manamboatra karazana trano fandroana anatiny.
Ny mpanamboatra dia manolotra tranga manokana tahaka ny mpikarakara . Manana rindrin'ny rindrina sy fanakatonana zipo tsara izy ireo. Misy modely misy fizarana maromaro ho an'ny mpivady samihafa. Raha ilaina, dia azo atao ny manasa mora foana. Raha tsy misy toerana hametrahana boaty, dia azonao atao ny mampiasa kitapo tsotra izay azonao atao, na amin'ny tananao, na mividy. Ny saka amin'ny famahanana kiraro dia mety amin'ny halehibe isan-karazany mba hialana amin'ny kiraro sy ny boot. Mitahiry ny vovoka amin'ny vovoka sy ny fahasimbana isan-karazany izy ireo.
Mpikarakara ny fametrahana kiraro
Vao haingana, mpikarakara maro samihafa no malaza, ny tanjon'izy ireo dia ny mamonjy ny toerana araka izay azo atao. Te hahafantatra ny fomba fitahirizana kiraro, ary tandremo ireo mpikarakara ny tranokala, ao anaty efitrano ahafahanao mametraka kiraro. Tsy manangona toerana malalaka izy ireo ary azo apetraka, ohatra, eo ambany fandriana. Safidy iray lehibe hafa - fanangonana antonta, paosy, mifatotra amin'ny baranjely tsotra ao am-patana, ary misy modely modely amin'ny fanamorana ny rindrina na varavarana.
Kitapo fitahirizana akanjo
Misy karazana maro samihafa izay afaka misokatra sy mihidy. Eritrereto ireo modules malaza indrindra:
Tsy dia misy toerana malalaka ny trano fitehirizana maoderina, fa afaka manangona pairs maro izy ireo, ary misaotra noho ny fikarakarana entana tsara. Safidy tsara - ny kabinetra-galoshnitsa, izay misy ny toeram-pivarotany mba ho toerana ambony ny kiraro.
Eritrereto ny fomba hitehirizana kiraro ao an-dalantsara, dia hevero ny safidy ho an'ny fanakambana kiraro, izay mety amin'ny tsy fisian'ny toerana be loatra. Ny teti-dratsiny dia tena samihafa, noho izany dia misy safidy mitovitovy amin'ny alim-pandaharana mahazatra, saingy misy elanelana mitongilana izay mihodina.
Raha tianao ny zavatra tany am-boalohany, dia ny fitehirizana kiraro dia azo tanterahana eny amin'ny tohatra, ohatra, ny fantsom-panafody dia mety, izay, raha azo atao, dia mety hiangona sy hesorina.
Mijoroa mba hitahiry kiraro
Ho an'ny fahamendrehan'ny fametrahana kiraro ao am-baravarankely, eo amin'ny talantalana sy amin'ny toerana hafa dia misy seza manokana natao. Ao amin'izy ireo, ny pairs dia tsy mametraka laharana iray, fa amin'ny roa. Raha te-hitazona kiraro ao am-baravarankely ianao, dia safidy tsara io safidy io. Azo ampiasaina amin'ny famenoana kiraro ny toerana toy izany, alohan'ny hanesorana izany anaty boaty. Manana endrika tena tsotra izy io, izay mahatonga azy io ho mora ny hampifanaraka ny toerany, izay manamora ny fizotran'ny fitahirizana.
Sakafo fitahirizana kiraro
Rehefa mifidy fitaovana ianao, dia mila mihaino ny mombamomba ny toetrany, fa tsy ny mombamomba azy ihany. Androany any amin'ny mpivarotra dia afaka mividy zavatra izay afaka manao asa maromaro indray mandeha. Raha tsy fantatrao hoe ahoana no ahafahanao manamboatra kiraro, raha tsy ampy ny habaka, dia andramo ny pouffe misy fitoeran-tsakafa anatiny ho an'ny fitehirizana zavatra. Ao anatin'izany, afaka manafina kiraro vitsivitsy ianao, izay ahafahanao manisy paosy manokana. Safidy iray hafa amin'ny fikarakarana kiraro dia fanasana, izay azo apetraka ao an-dakozia, balkonina, ao an-dalantsara sy balkon. Misy ireo modely amin'ny efamira ho an'ny fanangonana kiraro.
Ahoana no hifehezana ny kiraro?
Ny kiraro rehetra dia azo zaraina amin'ny tarika roa: isan'andro and seasonal. Ny safidy tsirairay dia manana ny endriny manokana amin'ny fitehirizana azy. Maro ny karazana fikarakarana ny mpivady ao amin'ny tarika voalohany, ka lasa tsy misy dikany. Ny fitehirizana kiraro ao an-dalantsara dia tokony hilaza ny fandosirany. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mametraka fanaka manokana vita amin'ny vato. Ankoatra izany, zava-dehibe ny manamboatra kiraro tsy tapaka mba hiarovana azy amin'ny alàlan'ny hamandoana, vovoka ary vovoka. Rehefa mitahiry izany, dia mitandrema fa ny kiraro dia manana fidirana an-dalamby ary aza mifandraika.
Ny fitehirizana ny akanjo, izay an'ny vondrona mandritra ny taona, dia manatanteraka ny antsipirihany toy izany:
Fenoy gazety miaraka amin'ny volon'ondry miloko na volon'ondry miloko ny mpivady.
Tsy maintsy hiorina ny kiraro mba tsy hikorontana.
Apetaho ao anaty boaty na kitapo ny pairs tsirairay.
Aza mamihina kiraro ao anaty kitapo cellophane.
Esory ny lamba ary sokafy ireo.
Raha ilaina, manamboatra.
Fikarakarana kiraro fingotra
Maro no mino fa azo atao ny manangona kiraro na aiza na aiza, fa tsy izany. Rehefa misafidy fomba mahazatra manangona kiraro avy amin'ny fingotra ianao, dia eritrereto ireto fitsipika ireto:
Omano roa andro farafahakeliny roa ny mpivady, mba tsy ho faty intsony ilay izy.
Aza asiana kiraro avy amin'ny fingotra manakaiky ny fitaovana fanamainana sy eo ambanin'ny masoandro, satria izany dia hitarika ho amin'ny fisehon'ny habakabaka.
Mba hitahirizana ny akanjo avy amin'ny fingotra, mila miantoka amin'ny toerana ambony ianao, satria ny bobongolo dia mety hiorina rehefa tafapetraka ao anatiny. Raha mavesatra ny bootlegs, dia asio ao anaty gazety tampoka, izay tokony hovaina isaky ny 3-4 volana.
Alohan'ny handefasana kiraro fingotra ho an'ny tahirin-tsakafo, dia asaina manasitrana azy io miaraka amina glycerine kely avy any ivelany, ary mandatsaka ny talcum ao anatiny.
Fikojakojana kiraro hoditra
Tsy misy fitsipika manokana mikasika ny fitehirizana ny akanjo amin'ny hoditra, noho izany dia ilaina ny mandray an-tanana ny fitsipika ankapobeny voalaza etsy ambony. Ny toro-làlana momba ny fomba hananganana kiraro hoditra dia manondro tsara fa tokony hodiovina tsara ny fitifirana ny doro alaina, maina ary alaina amin'ny siramamy. Ao anatiny dia ilaina ny mametraka volon'ondry vita amin'ny taratasy na ny lamban-jiro mba hanangonany ny fahosana tafahoatra. Mitahiry ny endriny amin'ny fomba mahitsy mba tsy hikorontana.
Amin'ny firy no azonao tanterahana kiraro?
Ny fepetra fototra tokony hodinihina rehefa mitahiry ny kiraro ny mari-pana sy ny hatsembohana, izay tokony ho mihoatra ny 60%. Ny filazalazana ny fomba fametrahana kiraro, dia zava-dehibe ny mandinika fa ny hafanana dia tsy tokony ho ambany loatra na avo loatra, ka ny fetra dia heverina fa ny 15-25 ° C tsara indrindra. Eo am-piandohan'ity, mazava fa tsy tokony handao kiraro amin'ny efitrano tsy misy fofona sy manify, ary mametraka azy ireo eo akaikin'ny fitaovana fanamainana na amin'ny tara-masoandro mivantana.
Ahoana no fomba hanomanana kiraro fitehirizana?
Io tongotra io dia nanompo tsy nisy vanim-potoana iray, ilaina ny mikarakara azy tsara ary manomana izany amin'ny fametrahana azy. Noho izany dia ilaina ny mandray ireo fitsipika ireo:
Esory ny vovobony amin'ny fisafidianana ny fomba arakaraky ny fitaovana: esory ny hoditra misy lamba vita amin'ny alika amam-bozaka, akoho na dipoavatra miaraka amin'ny vovobony manokana sy savony manokana, ary mamela ny fanangonana rano amin'ny fampiasana savony.
Ny fitehirizana kiraro isan-taona dia tsy azo atao afa-tsy aorian'ny fanafarana feno, tsy mampiasa fotsy, batteries ary ny toy izany.
Avy any ivelany, dia entina amin'ny kofehy ny kiraro, ary ny fitsaboana anatiny dia mampiasa ranon-tsakafo. Azonao atao ny manolo azy amin'ny fanafon-tanam-bahoaka, ohatra, manomana vahaolana malemy avy amin'ny permanganate potassium, peroxide na vinaingitra. Esory ny ao anaty kiraro miaraka amin'ny vokatra vita.
Manentana ny hampidirana toerana manokana na fonosana namboarina ho an'ny bootlegs. Raha tsy misy boaty lehibe ho azy ireo, dia tehirizo ny kiraro amin'ny tohatra mihantona amin'ny fampiasana kiraro kely amin'ny lamba lamba.
Noho ny fanatsarana ny akanjo ho an'ny fanangonana?
Mba hahazoana antoka fa mandritra ny fitahirizana, tsy maina ny fitaovana, tsy mihodina ary tsy mivoatra, manolo-kevitra ny mampiasa fitaovana manokana.
Ho an'ny fitaovana malamaso, ny emulsions izay tsy ahitana saboran-tsakafo toy ny crème dia mety. Midika izany fa mamorona sarimihetsika matevina eo amin'ny sehatra izay manome fitaratry ny rivotra. Ny emulsion dia mitana loko, manakana ny fitsangatsanganana ary mitazona endrika miavaka.
Raha mitady lobaka ho an'ny kiraro ny tahiry ririnina vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra, dia mifidiana ny crème kiraro. Tsy maintsy ampiharina amin'ny sponge izany ary miparitaka amin'ny tany, ary esory miaraka amin'ny napkin. Fa tsy mamy ny hoditra hoditra voajanahary.
Ho an'ny vokatra varimbazaha dia mety tsara ny fiaramanidina, izay hitazona glaogy ary hisoroka ny fitsaboana.
Alohan'ny hametrahana kiraro amin'ny hoditra voajanahary, mila entina amin'ny glycerine izy, izay mitazona elasticity. Ho an'ny hoditra malefaka, menaka solifara, izay hamerina ny tany, dia hijanona ho malefaka sy malefaka.
Ahoana ny fanesorana ny tasy avy amin'ny menaka amin'ny akanjo?
Ny fofona amin'ny kiraro dia ny fomba famonosana azy?
Ahoana ny fanesorana ny bobongolo amin'ny fonosana?
Ny fomba hanesorana ny tavy avy amin'ny harafesina no fomba tsara indrindra hamahana ny olana
Ahoana ny fomba famonosana ny rivotra ao amin'ilay efitrano?
Ahoana ny fomba fametahana tapakila taratasy?
Rehefa tsy afaka milomano amin'ny volana Aogositra ianao?
Ny fihanaky ny spastika - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Akanjo mariazy miaraka amin'ny korset - fifantenana ny modely tsara tarehy sy maotina tsara indrindra
Mahatsiaro ny volon'ondry - kilasy maoderina
Voninkazo avy amin'ny tànana napkins
Fanamboarana fandroana mitongilana
Dinan, Belzika - toetrandro
Nahoana ny ankizy no mamofoto ny vavany?
Nifaly ny namana iray antsoina hoe George Michael taorian'ny famoahana ny antony nahafatesan'ilay mpihira
Mipetrapetraka amin'ny kohaka
Ny soritr'aretina pox ao amin'ny ankizy
Mpaminany Muhammad - firy taona no lasa mpaminany i Muhammad ary firy vady no nananany?